ညီရဲသစ်: လူတချို့ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Posted by ညီရဲသစ် at 20:20
စံပယ်ချို6December 2011 at 21:03
Candy6December 2011 at 22:09
မှန်၏.. သုံးသင့်တဲ့နေရာတော့ သုံးသင့်တယ်.. မဖြုန်းရင်ပြီးရောပေါ့ နော့... :D :D
Cameron6December 2011 at 22:42
အင်း လောကမှာ လူတွေကိုယ့်အခြေနေကိုယ်မသိတာအဆိုးဆုံးပဲ....။ လူတစ်ယောက်ဟာ သေဆုံးသည်အထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလဲဆိုတာ ရှာဖွေမတွေ့သွားနိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီး....။
သဒ္ဓါလှိုင်6းDecember 2011 at 22:50
ပိုက်ဆံချမ်းသာရဲ့သားနဲ့ မစားရက်ပဲနေပြီး မလှူရက်နဲ့ နေမယ်ဆိုရင် အမှောင်လမ်းကို သွားတဲ့သူတွေပေ့ါ၊ သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတခုကြောင့် ပိုက်ဆံချမ်းသာပေမယ့် (အလင်းထဲကနေလာတာဖြစ်တယ်) ခုမလှူခဲ့ဘူး ဆိုရင် အလင်းထဲကနေ အမှောင်ထဲကိုသွားမယ့်သူတွေဖြစ်သွားမယ်။ အမှောင်ထဲကလာလာ၊ အလင်းထဲကလာလာ အလင်းထဲကိုပြန်သွားနိုင်မယ့် အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ကြပါစေ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)7December 2011 at 01:42
ပိုက်ဆံချမ်းသာရက်နဲ့ ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေကို တွေ့ဖူးတယ်
ဘယ်လောက်များလည်းဆိုရင် ကိုယ့်မိဘကိုယ်ပေးဖို့တောင် တွန့်တိုကြတယ်
ပိုက်ဆံမရှိလို့ တွန့်တိုတာဆို မပြောပါဘူး
ခုတော့ ရှိရက်သားနဲ့ ခုလိုတွန့်တိုတာ
မိဘကတော့ မတွန့်မတိုနဲ့ တစ်သက်လုံး ကျွေးမွေးလာရတာ..
ဒါမျိုး လူတွေ များများရှိရင် မလွယ်ဘူးနော်.
Anonymous7December 2011 at 08:58
အဲလိုလူတွေအများကြီးပဲ လောကမှာတကယ်ကိုရှိနေသေးတယ်း)
မိုးခါး7December 2011 at 12:56
အင်းးး ဘယ်အရာမှ အစွန်းမရောက်ပဲ ဥာဏ်နဲ့ချင့်ချိန် သင့်တော်မျှတအောင် နေတတ်ဖို့ လိုတယ်နော် ..
နေ၀သန်7December 2011 at 13:11
လောကမှာ နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ် ကိုညီရဲရေ.... ကိုယ့်အိုးကိုယ့်ဆန် တန်ရုံပဲ သုံးဖို့လိုအပ်သလို... အလဟဿကျစ်ကုတ်ခြင်း ကိုလည်း ရှောင်သင့်တာပေါ့... တကယ်တော့ အသိတရားပါ.. လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ဘ၀ကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုတာကို ဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်တဲ့ ဥာဏ်မပါရင် မလွယ်ပါဘူး... ...
မြသွေးနီ7December 2011 at 14:04
ဒီပို့စ်လေးကို သဘောကျတယ် ညီရဲရေ...။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တကယ် ရှိနေတတ်တဲ့ လူတန်းစားနှစ်မျိုးကို ပြသွားတာ ပေါ်လွင်တယ်။
Maung Myo7December 2011 at 15:31
ကျနော်လည်း နေရာအထားအသိုတွေမမှား အောင် ဂရုစိုက်ရမယ်.....
ညီလင်းသစ်7December 2011 at 19:55
ကိုယ်နေထိုင်ရာ ဝန်းကျင်နဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်တောင် မသုံးစွဲဘဲ တွန့်တိုနေတာ ကတော့ အစွန်းရောက်လွန်း ပါတယ်၊ ချမ်းသာတဲ့ ဆင်းရဲသား ဆိုတာ အသင့်လျော်ဆုံး စကားလေးပါပဲ၊ အဲ.. ဆင်းရဲတဲ့ လူချမ်းသာ ကျတော့လည်း ဟိုတဖက်စွန်း ပေါ့လေ..၊ မြင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လူနှစ်မျိုးကို ယှဉ်ရေးပြတဲ့ ဒီပို့စ်လေး သဘောကျတယ်..။
တောက်ပကြယ်စင် 8 December 2011 at 01:11
နှစ်ခုလုံး မကောင်းဘူးလို့ ထင်မိတယ် ကိုညီရဲရေ။ အဲဒီနှစ်ခုကို တစ်ခုပဲ ရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒုတိယတစ်ခုက ပထမတစ်ခုထက် နည်းနည်းတော့ သာပါသေးတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သုံးနေရသေးတာကိုး။
Anonymous 8 December 2011 at 15:12
ပထမအမျိုးအစားလိုလူမျိုးတွေကိုတွေ့ဖူးတယ်။ သူတို့ကိုတော့ ပိုက်ဆံချမ်းသာလို့ အားမကျတဲ့အပြင်သနားတောင်သနားမိတယ်။ ဒုတိယလူစားမျိုးလိုမဖြစ်အောင်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးစွဲရမယ်....ကျေးဇူးပဲ ကိုကြီးရဲရဲ.... :)
ညိမ်းနိုင် 8 December 2011 at 20:14
ဟုတ်ပါ့....၊ပထမလူမျိုးထက် ဒုတိယလူမျိုးတွေ ပိုများများတွေ့ရတယ်....။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ)9December 2011 at 02:46
ရောက်ပြီး ခြေရာမထားခဲ့ရတာ ကြာလို့ ခြေရာချန်ခဲ့တယ် ညီရဲရေ ...း)
rose of sharon9December 2011 at 19:07
အဲလိုတွေလွဲနေကြတာ အများကြီးပါဘဲ... တွေ့ဘူးတယ်...
...အလင်းစက်များ 10 December 2011 at 17:37
ဒီလို မိသားစုမျိုးလည်း ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ အားလုံးနဲ့Flexible ဖြစ်တဲ့ မိသားစုတွေလည်း ကြုံဖူးပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား ကတော့ လောလော ဆယ် ကိုယ် ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကော်မန့်မပေးလို ပါ ဟ၊ီးဟီး
blackroze 11 December 2011 at 01:09
mstint 12 December 2011 at 19:46
ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲသား နဲ့ ဆင်းရဲတဲ့သူဌေးရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေ
လေ့လာမှတ်သားသွားတယ် မောင်ညီရဲရေး)
ပန်းချီ 12 December 2011 at 22:46
အင်း...ဒီလိုလူမျိုးတွေ များနေပြီဗျို့...မပြည့်တဲ့အိုးတွေက ဘောင်ဘင်ခတ်တတ်ပြီး၊ ပြည့်တဲ့အိုးတွေ မှာတော့ သောက်သုံးမျှဝေနိုင်တဲ့ အင်အားနည်းကြတယ် ကိုညီရဲရေ..း)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 13 December 2011 at 06:14
07July 2022 - ​ဒီ​နမေ့နကျစာ မကွိုကျ​ပမေယျ့လညျး အကငျြ့လုပျပွီး စားလိုကျ​တော့ စားတတျသှားတာပါပဲ။ တကယျဆို မွနျမာလူမြိုးပီပီ မနကျစာဆိုရငျ မုနျ့ဟငျးခါးတို့ အသုပျစုံနဲ့ဟငျ...
ဘျောတှငျးသတ်တုတှငျးမှ ရဲစခနျးကို ကအေိုငျအတေပျဖှဲ့ တိုကျခိုကျ - နမ်မတူ - ဇူလိုငျ ၅၊ ၂၀၂၂။ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျး၊ နမ်မတူမွို့နယျ၊ ဘျောတှငျးသတ်ထုတှငျးရှိ စဈကောငျစီရဲစခနျးကို ယမနျနေ့ နံနကျ ၈နာရီခနျ့က ကအေိုငျအတေပျဖှဲ့က တိုက...
တဈနနေ့ရေ့ောကျခဲ့ရငျ..... - ကမြဆီကခံစားမှုတှေ အားလုံးကို ယူသှားပါ..... ကမြသိလိုကျသညျဖွဈစေ တိတျတဆိတျဖွဈစေ ယူသှားပါ.... တဈနနေ့ရေ့ောကျခဲ့ရငျ..... ကြေးဇူးပွုပွီး နှုတျမဆကျဘဲ... က...